အမျိုးသမီးအင်္ဂါမှာ မှည့်ပါလာရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲ – ဗေဒင်သုတ
အမျိုးသမီးအင်္ဂါမှာ မှည့်ပါလာရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲ
October 5, 2021 October 5, 2021 smt	View : 26
ခဏခဏ အမေးခံရလွန်းလို့ မမေးစေလိုပါ ဆိုပြီးလားပဲ …ကျွန်တော် ပုိ့စ်တစ်ပုဒ်တောင် ရေးတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘာမေးခွန်းလဲ ဆိုတော့….ဆရာ မိန်းမအင်္ဂါမှာ မှည့်ပါတာ …ဘာဖြစ်တတ်သလဲရှင့်.. ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ ဒီမေးခွန်းကို အနီးဆုံးကာလအဖြစ်… ပြီးခဲ့တဲ့လထဲကလည်း တစ်ခါထပ်မေးခံရပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် သူမ မေးခွန်းက ….အောက်ပါအတိုင်းပါ။ ဆရာ…မိန်းမအင်္ဂါမှာ မှည့်ပါရင် ယောကျာ်းသေတတ်တယ် ဆိုတာ ဟုတ်သလားရှင့်တဲ့။
အစကတော့ ကျွန်တော် ဒီမေးခွန်းမျိုးတွေကို စိတ်လည်းကုန်နေတာမို့တစ်ကြောင်း၊ သူစိမ်းယောကျာ်းသား တစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် လိင်အင်္ဂါအကြောင်းလည်း မဆွေးနွေးသင့်လို့လည်း ယူဆမိတာကြောင့် တစ်ကြောင်း…မဖြေဘူးလို့ နေတာပါ။
ဒါပေမယ့် …. အမျိုးသမီးငယ် စိတ္တဇကပ်နေပြီး စိတ်သောကရောက်နေပုံရတာကြောင့်…ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ (နောက်ကိုတော့ ဒါမျိုးမမေးပါနဲ့တော့ ဆိုပြီး တားရပါသေးတယ်)။
ကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်တာကတော့ …အမျိုးသမီးအင်္ဂါမှာ ဖြစ်စေ..အမျိုးသားအင်္ဂါမှာ ဖြစ်စေ… မှည့်ပါနေခဲ့ရင် အိမ်ထောင်ဖက်ကို သေဆုံးစေနိုင်သည် ဟူသည်မှာ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ထိုသို့မှည့်ပါနေခဲ့ရင် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို (တနည်း) အိမ်ထောင်ဖက်ကို အိမ်ထောင်ရေးသုခ (ကာမသုခ) ပိုမိုပေးနိုင်သည့် လက္ခဏာသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိလာတာလေးတစ်ချက် ပြောချင်တာရှိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဒီခေတ် ဒီကာလမှာ အချို့သော ယုတ်မာသော ပညာခုတုံးလုပ်အသက်မွေးနေသည့် ဗေဒင်ဆရာတစ်ချို့သည်အမျိုးသမီးအရွယ်ကောင်းများကို ဗေဒင်ဟောဆိုသည့်အခါမှာ …နင့်ရဲ့ မ်ိန်းမကိုယ်မှာ မှည့်ပါသလား ပါရင် .ယောကျာ်းသေတတ်တယ်။ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ သေကွဲကွဲတတ်တယ် စသည်ဖြင့် ဟောဆိုမှု စတင်ပါတယ်။ မပါခဲ့သည့်မိန်းကလေးက ကိစ္စမရှိပေမယ့် ၊ တစ်ကယ် ပါနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ချို့မှာ စိတ်သောက ၊ စိတ်ဥပါဒ် စတင် ဖြစ်စေတော့တာပါပဲ။
ဒါနဲ့ပြီးပြီလား ဆိုတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ အဲလိုစိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲ မြင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီလိုလူယုတ်မာမျိုးတွေက. ဒီမှည့်ကို ဖျောက်မှဖြစ်မယ်။ ဖျောက်ချင်ရင် ဆရာ့ဆီ ဘယ်နေ့လာခဲ့။ ဘာပွဲညာပွဲ ထိုးရမယ်။ ဆရာဂါထာမန်းပြီး မှည့်ကနေအပြစ်မဖြစ်နိုင်အောင်…ဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ် ညာလိုလုပ်ပေးမယ်နဲ့ ထပ်ဆင့် လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို ကာမလိမ်လည် ရယူခံရသည်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ကြတာလည်း ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဆိုတော့ …နှမတွေ ၊ အစ်မတွေ ကို တစ်ခုလေးသတိပေးလိုတာက ..မှည့်ဆိုတာ မှည့်ပါပဲ။ ထူးခြားသော မွေးရာပါ မှည့်မျိုးကသာလျင် အကျိုးအပြစ်ကို ထင်ရှားစေပါတယ်။ ခါတော်မီမှည့်တွေဆိုတာကတော့ အသက်ကြီးလာလေလေ ဟိုသည် နေရာအနှံ့ ပေါ်လာလေလေ။
ဥာဏ်မတိမ်ပါနဲ့။ မကြောက်ပါနဲ့။ ကြောက်တတ်သူ ၊ဥာဏ်တိမ်သူကိုပဲ လူယုတ်မာတွေက ပစ်မှတ်ထားကြတာပါ။ မိမိဥာဏ် နဲ့ မိမိရဲ့ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုကသာလျင် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီခေတ်ကတော့ …လူယုတ်မာတွေ အလွှာအသီးသီး ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ သိပ်ပေါသည့်ခေတ်ပါ။ ဘယ်သူပြောတာမှ လွယ်လင့်တစ်ကူ မယုံစားစေလိုပါ။
လေးစားစွာဖြင့် – ဆရာစိုးမိုးထွန်း (ခေါ်) ဆရာဝေသာလီမောင်ဖုန်း 09 789 333 791
← သက်စေ့နံတူ ကုသိုလ်ယူ ယတြာ
ထီကံ အကောင်းဆုံး ရာသီခွင်များ (98,588 views)
မြန်မာဗေဒင်ထဲက ဘုမ္မိစက်ကွင်းအကြောင်း (63,754 views)
ဘုရားပန်းအိုးတွေ လဲတဲ့အခါ… (49,366 views)
မွေးရက်ဂဏန်းနဲ့ မိတ်ဖက်ဂဏန်းများ (48,822 views)
ဒီနှစ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်ထဲမှာ ငွေဝင်၊ ထီပေါက် ကံကောင်းမယ့်သူများ (44,910 views)
သက်စေ့နံတူ ကုသိုလ်ယူ ယတြာ
ဂဏန်းဗေဒင်လစဉ်ဟောကိန်း (အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၁)